Maamulka Hargeysa iyo Djibouti oo Ciyaari Dhuuma-Dhuumaw – Xeernews24
Maamulka Hargeysa iyo Djibouti oo Ciyaari Dhuuma-Dhuumaw
Hargeysa(XeerNews24)Maamul goboleedka Somaliland iyo Jabuuti ayaa dib u bilaabay inay soo gabagabeeyaan dhagaysiga Dacwadii Qaraxii Jabuuti ka dhacay saddex sano ka hor, taasoo maxaabiis ka mid ah Eedaysanayaashii hore dawladda Jabuuti loogu gudbiyey, halka ay Somaliland qaarkood Maxkamaddaysay, kuwa kale-na ay wali xabsiga ku hayso.
Weftigii wasiirka Arrimaha Gudaha Jabuuti iyo saraakiishii la socotay ayey wararku sheegayaan ujeedada ugu weyn ee booqashadoodu inay la xidhiidhay sidii loo soo af-jari lahaa Dacwada maxaabiista ku kala xidhan Jabuuti iyo Somaliland, waxaanu weftigu ka codsaday in baadhista wixii ka dhiman ay Somaliland ka caawiso.
Wararka laga helayo dalabka weftiga Jabuuti ayaa la sheegayaa in ay xukuumadda Somaliland ka aqbashay, balse ay shuruudo ku xidhay, iyadoo ay hore Somaliland iyo Jabuuti ugu heshiiyeen marka maxaabiista ay hayso xukun ku rido inay dalkooda dib ugu soo celiso, taasoo caqabad ku noqotay codsigoodii ahaa in kuwa kale-na loo dhiibo.
Warar xogogaal ah ayaa sheegaya in Hay’adda awooda u leh arrintan ay ka diideen labada xukuumaddood-ba, hase yeeshee waxay u fududeeyeen dariiq ka duwan kii hore, waxaana la filayaa in Dacwadaas dhawaan la soo gabagabeeyo.
Somaliland waxay xidhiidh dhaw dhinaca Amaanka kala leedahay dalalka deriska ah, iyadoo ay ku heshiiyeen danbiilayaasha in la isku celiyo, hase yeeshee kiiskan oo ahaa mid xaasaasi ah waxay labada Dal ku heshiiyeen in la soo af-jaro, maadaama uu dhinaca Jabuuti wakhti dheer ku qaatay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/12/qaraxi.jpg 168 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-12-25 12:37:162016-12-25 12:37:16Maamulka Hargeysa iyo Djibouti oo Ciyaari Dhuuma-Dhuumaw
Akhirso: War murtiyeed ka soo baxay shirkii Madasha iyo 18 xubnood oo lagu kordhiyay... Cali Khaliif Galeyr oo sheegay marnaba inaysan suuragal aheyn inay ku biiraan...